Imephu yeNvelope kunye neLiso laseLondon-iGeofumadas
NgoNovemba, 2010 Google umhlaba / imephu, Uhambo
I-MapEnvelope ngumsi othakazelisayo nomlula wenkwenkwe enomdla omkhulu wokwakha.
Ukuba ufune ukumangaliswa ngokuthi ufuna ukuphi na uhlobo oluthile, i-MapEnvelope, njengoko itsho igama layo, ivelisa imvulophu ephethe imephu eprintiweyo.
Kufuneka kuphela ukungena kwindawo, umzekelo:
iso london, london, uk
Kwaye umbono weGoogle Maps uboniswa ngokuzenzekelayo kuloo ndawo, kanye ngaphaya kweLiso laseLondon. Emva koko umyalezo wesiko ungabekwa:
Ukulahlekelwa kwendiza eLondon kunembuyekezo xa uhamba ngeLondon Eye.
Ekugqibeleni iqhosha lokuhlola kuqala, ukujonga ngolu hlobo kwaye uprinte iphepha.
Emva koko, kuyimfuneko kuphela ukugawula umgca kunye nokugoba kumigca ephawulwe njengokuba kuboniswe kumfanekiso othathwe kwiwebhu.
Iliso laseLondon okanye iMillennium Wheel yile ndandatho inkulu ijikelezayo, ekuMlambo iThames eLondon. Ukufika apho akukho nzima, ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseLondon kuya kufuneka uhlawule kuphela usuku lukaloliwe olungaphantsi komhlaba (i-14 yeepawundi), uluse kwisiphelo sendlela 5, utshintshe ukusuka kumbala oluhlaza okwesibhakabhaka ukuya kumbala ongwevu uyehla eWestminster. Uhambo olujikelezayo lungathatha ngaphantsi kweeyure ezimbini.
Faka iindleko ze-15 Libras, kubandakanya imbonakalo yangaphambili yesithathu kunye nesithombe ukukhumbula ukuba ufuna ukuhlawula ngaphezulu i-10 Libras.
Ivili aliyeki, ngaphandle kokuba kungena abantu abakhubazekileyo. Njengokuba ijikeleza ezantsi, inika ixesha lokuba abantu baphume kwiqamza, abanye abantu abanee-sensors zokhuseleko bayangena kwaye abantu abatsha abali-15 bayangena nabo. Iluphu epheleleyo ithatha malunga nemizuzu engama-35.
Kuyachukumisa, mhlawumbi abanye bayayonwabela imbono, kunye neefoto. Kweli cala siyabunandipha ubuchule bokumisa ivili lebhayisikile elinobunzima obuziitoni ezili-1,700 kubude beemitha ezili-135 kwiintambo zeradiyali.
Ngaphezulu Iso laseLondon.
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-AutoCAD ibuyela kwi-Mac
Post Next Imixholo ye-118 evela kwi-FOSS4G 2010Okulandelayo »